Medical School How to Survive and Thrive
Career Advice Education University Upgrade Yourself
ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရှင်သန်ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်မလဲ
ဆေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားအများစု တက်ချင်ကြတဲ့ အိပ်မက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေရော၊ မိဘတွေပါ ပေါ့ပေါ့ တန်တန် မယူဆသင့်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အာရှနိုင်ငံအများစုက ဆယ်ကျော်သက် အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းတွေကို မဖြစ်မနေရွေးချယ်ကြရပါတယ်။ ဒါက တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်း အင်မတန်စိတ်ရှုပ်ထွေးရပြီး ကလေးတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးမှာ လမ်းညွှန်ပေးဖို့အချိန်ကျလာတဲ့အခါ မိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်း များသောအားဖြင့် လမ်းညွှန်ပြနိုင်တဲ့ ၀မ်းစာလုံလုံလောက်လောက်မရှိတတ်ကြပါဘူး။
ဒီတစ်ပတ်မှာ Wynee က ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားသင့်ပုံတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရဖို့က အခက်ခဲဆုံးလို့ တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရဖို့က ပိုပြီးတော့ စိန်ခေါ်မှုများပါတယ်။ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ လူတစ်ဦးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ရတဲ့ ဆေးပညာနည်းလမ်းတွေကို သင်ယူရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်က တကယ်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ဘ၀ကို စတင်စဉ်မှာပဲ အားအင်ကုန်ခမ်းသွားတတ်ကြပြီး အသစ်အသစ်သော ဖိအားနဲ့ တာဝန်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ စာမေးပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ သူတို့မှာ တက္ကသိုလ်နဲ့ စာလေ့လာတဲ့အုပ်စုတွေကလွဲရင် ”လူမှုဘ၀” တစ်ခုဖန်တီးဖို့ အချိန်မရှိတတ်ကြပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖိအားတွေက ဘယ်တော့မှလျော့ကျမသွားပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဆေးပညာရပ်ရဲ့ ဖိအားတွေက လူတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးခိုင်မာလာဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။
အဖြူရောင်ဆရာဝန်ကုတ်အင်္ကျီလေး၊ ဆရာဝန်တွေသုံးတဲ့ နားကြပ်ကိရိယာလေး၊ ဓာတ်မှန်ကားချပ်လေး၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာအခေါ်အဝေါ်တွေ စတာတွေက အထင်ကြီးစရာကောင်း တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လက်တွေ့မှာ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အဲဒီလိုအသုံးအဆောင်တွေကို တာဝန်ကျတဲ့အချိန်ကလွဲရင် အသုံးပြုခဲပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက အများကြီး စာလေ့လာရပြီး စာမေးပွဲတွေအတွက် ပြင်ဆင်နေရပါတယ်။
ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ပြင်ပက ၀ါသနာတွေ၊ အိပ်မက်တွေရှိသင့်ပါသလား။ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေမှာ စာပဲလေ့လာရမယ့် တာဝန်တစ်ရပ်ရှိတယ်လို့ တချို့က ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကို သဘောမတူပါဘူး။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလေးပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ အာရုံစိုက်ပါစေ၊ အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်လို့ ကျွန်တော်တို့ယူဆခဲ့တဲ့အရာကို အချိန်တစ်ခုမှာ ရရှိခဲ့ပြီးရင်တောင် ကျွန်တော်တို့က ဘယ်တော့မှ အပြည့်အ၀ အားရကျေနပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းကောင်းနဲ့ နေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲတွေက ဂျူနီယာတွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသစ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ တခြားတက္ကသိုလ် တွေက အလည်လာတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသစ်တွေနဲ့ (ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ တောင်) တွေ့ဆုံနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လူမှုရေးနဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ
အဖွဲ့အစည်းတွေက သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး စွမ်းရည်အသစ်တွေသင်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအသစ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတွေက ပွဲတွေလုပ်ဖို့ ကူညီကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပွဲတွေက ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတာဝန် တွေယူကြည့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့က ကျဘမ်းစကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ပွဲစီစဉ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရှုမြင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ တခြား ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေကို လက်ခံပြီး တိုးတက်မှုအတွက် နေရာပေးတာက စာသင်ခန်းအတွင်းရော အပြင်မှာပါ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ထားရှိမယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆေးတက်ကသိုလျမှာ ဘယျလိုနထေိုငျရှငျသနျပွီး အကြိုးဖွဈထှနျးအောငျလုပျမလဲ
ဆေးတက်ကသိုလျဆိုတာ မွနျမာနိုငျငံက ကြောငျးသားအမြားစု တကျခငျြကွတဲ့ အိပျမကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆေးတက်ကသိုလျက ကြောငျးသားတှရေော၊ မိဘတှပေါ ပေါ့ပေါ့ တနျတနျ မယူဆသငျ့တဲ့ လမျးကွောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ အာရှနိုငျငံအမြားစုက ဆယျကြျောသကျ အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျအကိုငျလမျးကွောငျးတှကေို မဖွဈမနရှေေးခယျြကွရပါတယျ။ ဒါက တုနျလှုပျစရာကောငျးတဲ့တာဝနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ မိဘတှအေနနေဲ့ကလညျး အငျမတနျစိတျရှုပျထှေးရပွီး ကလေးတှအေတှကျ သူတို့ရဲ့ အနာဂတျတညျဆောကျရေးမှာ လမျးညှနျပေးဖို့အခြိနျကလြာတဲ့အခါ မိဘတှကေိုယျတိုငျလညျး မြားသောအားဖွငျ့ လမျးညှနျပွနိုငျတဲ့ ဝမျးစာလုံလုံလောကျလောကျမရှိတတျကွပါဘူး။
ဒီတဈပတျမှာ Wynee က ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး စဉျးစားသငျ့ပုံတှကေို အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဆေးတက်ကသိုလျတကျခှငျ့ရဖို့က အခကျခဲဆုံးလို့ တှေးကောငျးတှေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆေးတက်ကသိုလျကနေ ဘှဲ့ရဖို့က ပိုပွီးတော့ စိနျချေါမှုမြားပါတယျ။ ၁၆ နှဈ၊ ၁၇ နှဈလူငယျတှအေနနေဲ့ ကွီးမားတဲ့တာဝနျတဈရပျဖွဈတဲ့ လူတဈဦးရဲ့ အသကျကို ကယျတငျရတဲ့ ဆေးပညာနညျးလမျးတှကေို သငျယူရပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျက တကယျကိုခကျခဲကွမျးတမျးပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျတှဟော သူတို့ ရဲ့ ဆေးတက်ကသိုလျဘဝကို စတငျစဉျမှာပဲ အားအငျကုနျခမျးသှားတတျကွပွီး အသဈအသဈသော ဖိအားနဲ့ တာဝနျတှကေို ရငျဆိုငျကွရပါတယျ။ စာမေးပှဲတဈခုပွီးတဈခုနဲ့ သူတို့မှာ တက်ကသိုလျနဲ့ စာလလေ့ာတဲ့အုပျစုတှကေလှဲရငျ ”လူမှုဘဝ” တဈခုဖနျတီးဖို့ အခြိနျမရှိတတျကွပါဘူး။ စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ဖိအားတှကေ ဘယျတော့မှလြော့ကမြသှားပါဘူး။ သို့သျောလညျး ဆေးပညာရပျရဲ့ ဖိအားတှကေ လူတဈယောကျကို ပိုပွီးခိုငျမာလာဖို့ တှနျးအားပေးပါတယျ။
အဖွူရောငျဆရာဝနျကုတျအင်ျကြီလေး၊ ဆရာဝနျတှသေုံးတဲ့ နားကွပျကိရိယာလေး၊ ဓာတျမှနျကားခပျြလေး၊ ဆေးပညာဆိုငျရာအချေါအဝျေါတှေ စတာတှကေ အထငျကွီးစရာကောငျး တယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တကယျလကျတှမှေ့ာ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ အဲဒီလိုအသုံးအဆောငျတှကေို တာဝနျကတြဲ့အခြိနျကလှဲရငျ အသုံးပွုခဲပါတယျ။ ကြောငျးသားတှကေ အမြားကွီး စာလလေ့ာရပွီး စာမေးပှဲတှအေတှကျ ပွငျဆငျနရေပါတယျ။
ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ တက်ကသိုလျပွငျပက ဝါသနာတှေ၊ အိပျမကျတှရှေိသငျ့ပါသလား။ ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားတှမှော စာပဲလလေ့ာရမယျ့ တာဝနျတဈရပျရှိတယျလို့ တခြို့က ဆိုကွပါလိမျ့မယျ။
ဒါကို သဘောမတူပါဘူး။ လူတဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုလေးပျေါမှာ ဘယျလောကျပဲ အာရုံစိုကျပါစေ၊ အမွငျ့ဆုံးပနျးတိုငျလို့ ကြှနျတျောတို့ယူဆခဲ့တဲ့အရာကို အခြိနျတဈခုမှာ ရရှိခဲ့ပွီးရငျတောငျ ကြှနျတျောတို့က ဘယျတော့မှ အပွညျ့အ၀ အားရကနြေပျခွငျးမရှိပါဘူး။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဒါတှကေို ကြျောဖွတျခဲ့ပွီးတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံက ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျ၊ လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးကောငျးနဲ့ နထေိုငျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို အကွံပွုပေးနိုငျပါတယျ။
မောငျမယျသဈလှငျကွိုဆိုပှဲတှကေ ဂြူနီယာတှေ၊ တက်ကသိုလျကြောငျးသားသဈတှနေဲ့ ဆကျသှယျခြိတျဆကျနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပှဲတှမှော တခွားတက်ကသိုလျ တှကေ အလညျလာတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူသဈတှနေဲ့ (ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျနဲ့ တောငျ) တှဆေုံ့နိုငျမယျ့နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
၂။ လူမှုရေးနဲ့ တခွားအဖှဲ့အစညျးတှေ
အဖှဲ့အစညျးတှကေ သူငယျခငျြးအသဈတှနေဲ့ တှဆေုံ့နိုငျပွီး စှမျးရညျအသဈတှသေငျယူနိုငျဖို့နဲ့ စိတျဝငျစားမှုအသဈတှကေို ရှာဖှနေိုငျမယျ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
အဖှဲ့အစညျးတှကေ ပှဲတှလေုပျဖို့ ကူညီကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပှဲတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျမှုတာဝနျ တှယေူကွညျ့ဖို့ အခှငျ့အလမျးကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ အင်ျဂလိပျစာအဖှဲ့က ကဘြမျးစကားပွောစှမျးရညျပွိုငျပှဲကငျြးပတယျဆိုရငျ ကိုယျက ပှဲစီစဉျသူတဈယောကျအနနေဲ့၊ ဒါမှမဟုတျ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပါဝငျနိုငျပါတယျ။
ဒါက ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျရဲ့ ရှုမွငျခကျြပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တက်ကသိုလျတကျနစေဉျကာလအတှငျးမှာ တခွား ကိုယျ့ရဲ့ တိုးတကျရာတိုးတကျကွောငျး၊ လူမှုဆကျဆံရေးစှမျးရညျတှကေို တိုးတကျအောငျလုပျနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အပွောငျးအလဲတှကေို လကျခံပွီး တိုးတကျမှုအတှကျ နရောပေးတာက စာသငျခနျးအတှငျးရော အပွငျမှာပါ ဆေးတက်ကသိုလျကြောငျးသား တဈယောကျဖွဈဖို့ သော့ခကျြဖွဈပါတယျ။ သငျ့မှာ ပှငျ့လငျးတဲ့စိတျထားရှိမယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Medical school,amuch sought-after pursuit for Burmese students all over the country, isapath that students and parents should not take lightly. In Myanmar and most of Asia, teenagers must choose their career paths,adaunting task. That said, parents are often equally confused and insufficiently equipped when it comes to guiding their children into establishing their future. Wynee provides the following view in life asamedical student.
You may think getting into medical school was the hardest hurdle, but graduating medical school is much more challenging. Sixteen and seventeen year-olds are asked to learn how to save lives -abig responsibility - and the process is arduous.
Teens are often somewhat burnt out by the time they have to start their University life,and faceawhole new level of pressure and duties. Exams after exams, they barely have the time to havea‘social life’ outside of university and study groups. The stress and the pressure never subside, but the pressures of medical education push one to become stronger.
The white lab coat, the cool stethoscope, the X-rays, the medical terms, they seem awesome but in reality, students barely use such tools except from situations when on-duty. Student largely study and prepare for exams.
Shouldamedical student have passions and pursuits outside of school? Some would say medical students haveaduty to devote themselves solely to studies.
I disagree - As complex beings, no matter how much focus we pour into one part our lives, we never fully feel satisfied or complete even after achieving what we thought was our top goal at one point.Having gone through it myself, I can recommend some pursuits to help you stay sane and socially healthy asamedical student in Myanmar:
Fresher welcomes are one of many ways to connect with juniors and freshmen. These venues are often exchanges with other universities and it’sagreat way to meet new people, maybe evenaspouse!
Social and other clubs. Clubs areagreat way to meet new friends, learnanew skill, or exploreanew passion.
Events. Clubs will often sponsor events, and these areagreat opportunity to take on leadership responsibility. For instance, an English club may hold an impromptu competition and you can join as an organizer or participant.
This is just one medical student’s point of view, but there are many ways to develop other personal and interpersonal skills during their university years. Being open to change and having room for improvement is key to beingamedical student in and out of the classroom, and I hope you will have an open mind!